အီးမေးလ်ပို့ရန်ပံ့ပိုးမှု [email protected]
Support ကိုခေါ်ပါ +8618928650351
ကုန်အမှတ်တံဆိပ် OEM / လိမ္မော်ရောင်
သုံး -In-One Functional အပြင်ဘက် windbreaker ထုတ်လုပ်သူများ
ရေစိုခံအဆောက်အဦးအပြင် Hood အမျိုးသားများအတွက်လုပ်ငန်းခွင် Jacket Windproof လိမ္မော်ရောင်လိုဂိုလူပျိုအလွှာ
သုံး -on-one ဖြုတ်တပ်နိုင်သော mens windbreaker ဂျာကင်အင်္ကျီ
ထူးအိမ်သင်အားကစားစိတ်ကြိုက်ဂျာကင်အင်္ကျီ OEM ထုတ်လုပ်သူ windbreaker
ကုမ္ပဏီအမည်:Foshan Ruiniu အဝတ်အစား Co. , Ltd မှ.
လိပ်စာ:3ကြမ်းပြင်, Xiyueqijian ရှုပ်ထွေးသောအဆောက်အ ဦး,Leigang ရပ်ရွာ, Guicheng Subdistrict,Nanhai ခရိုင် Foshan,ဂွမ်ဒေါင်း,တရုတ်နိုင်ငံ
ဒီမှာအယ်ဒီတာကလူတိုင်းကိုမေးချင်တယ်, ကမ္ဘာ့ပြproblemနာကြောင့်မင်းစိတ်ပူပန်နေတယ် "ဒီနေ့ဘာဝတ်ရမလဲ?" နေ့တိုင်း, ထို့နောက်ချမ်းသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလ၌, ဒါက, သာအကျီဂျာကင်အင်္ကျီအနွေးဆုံးဖြစ်ပါတယ်. လူတိုင်းဆောင်းရာသီမှာကြားသိခဲ့ကြရပေမည်, Bosideng ရဲ့အောက်အကျီမှာပါ "ကြောင်းဆင်းဂျာကင်အင်္ကျီ ...
လုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးပြီးမြောက်ရန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုသည်ပေါင်းစည်းညီညွတ်မှုရှိရန်လိုအပ်သည်, နှင့်စည်းလုံးညီညွတ်မှု၏အရေးအပါဆုံးသရုပ်တစ်ခုယူနီဖောင်းအဝတ်အစားဖြစ်ပါတယ်. အလုပ်ခွင်အ ၀ တ်အစားများကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ခြင်းသည်အဖွဲ့တစ်ခု၏သို့မဟုတ်လုပ်ငန်းတစ်ခု၏ဂုဏ်သိက္ခာကိုမြှင့်တင်ပေးနိုင်ပြီးကောင်းမွန်သောစွဲမှတ်မှုဖြစ်စေနိုင်သည်။
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကာအကွယ်အ ၀ တ်အထည်သည်အဘယ်ပစ္စည်းဖြစ်သည်?
ကပ်ရောဂါအခြေအနေအောက်မှာ, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကာအကွယ်အ ၀ တ်အထည်ထုတ်လုပ်သူများကိုရှာဖွေနေသည့်ဖောက်သည်များအလွန်များနေသည်, သို့သော်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကာအကွယ်အ ၀ တ်အထည်များကိုစက်ရုံများအားလုံးကထုတ်လုပ်သည်မဟုတ်, နှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများ, လက်မှတ်များ, စသည်တို့ကို. အကာအကွယ်အဝတ်အစားထုတ်လုပ်ရန်စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်တွေ့ဆုံရန်ရမယ်. , သာမန်အရပ်သားကာကွယ်ရေးအဝတ်အစားများကိုဆေးရုံများတွင်အသုံးမပြုပါ; ကြည့်နေသည် ...
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာတစ်ခါသုံးအကာအကွယ်အ ၀ တ်အစားများမကြာခဏပြောင်းလဲခြင်း?
ဆန့်ကျင်စစ်ပွဲအဖြစ် "ကူးစက်မြန်ရောဂါ" အရေးအကြီးဆုံးသောမွတ်သိပ်မှုထဲသို့ဝင်ရောက်, အကာအကွယ်အဝတ်အစားသည်ပထမ ဦး ဆုံးကပ်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးအတွက်အရေးအကြီးဆုံးနှင့်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအကာအကွယ်ပစ္စည်းများဖြစ်သည်. အကာအကွယ်အ ၀ တ်အထည်ထုတ်လုပ်သူများရှာဖွေနေသည့်သူငယ်ချင်းများစွာလည်းရှိသည်, သို့သော်သင်သည်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာတစ်ခါသုံးအကာအကွယ်ပေးသည့်အဝတ်အစားများနှင့်ဘယ်လောက်မကြာခဏဝတ်လေ့ရှိသနည်း။
အကာအကွယ်အဝတ်အစားနှင့်အထီးကျန်အဝတ်အစားများအကြားခြားနားချက်ကဘာလဲ? 1. ကွဲပြားခြားနားသောပစ္စည်းများ: အထီးကျန်ဝတ်စုံအတွက်အသုံးပြုတဲ့အထည်ဖြစ်ကြသည်: စီးကူးပိုးပိုး၏ပိတ်ထည်, ကဗျာ, ချည်ကတ်များ, TYVEK (အက်ဆစ်နှင့်အယ်လကာလီခံနိုင်ရည်ရှိသည်), စသည်တို့ကို. 100% high-density ကို polyethylene ပစ္စည်း, တလုံးတည်းပါးပျဉ်းစတိုင်ဒီဇိုင်း, breathable, အစိုဓာတ်ကိုစိမ့်ဝင်နိုင်သည်, ကောင်းသောဖုန်မှုန့်များကိုပိတ်ဆို့ထားနိုင်သည်။
ဝူဟန်ရှိကူးစက်ရောဂါသည်ရက်စက်သည်, the people of the world love and even foreigners are unconditionally raising donated materials to Wuhan. Yanhuang မှဆင်းသက်လာသူများအဖြစ်အကာအကွယ်အ ၀ တ်အထည်ထုတ်လုပ်သူ Ruiniu အဝတ်အစား၏မိသားစု ၀ င်အားလုံး, သူတို့ဘယ်လိုရပ်နိုင်မလဲ! ကျေနပ်ရောင့်ရဲတဲ့အတွက် ...
The down jacket was born in 1936. American adventurers invented the world's first down-filled clothes in pursuit of the best external environment for mountain climbing. Thus, တွင် 1937 was born under the designer's hands. But at the time, designers did not believe that down jackets would be accepted by the…
Foshan Ruiniu အဝတ်အထည် Co. , L td, နန်ဟိုင်းတွင်တည်ရှိသည်, Foshan စီးတီး, ဂွမ်ဒေါင်းပြည်နယ်,တရုတ်နိုင်ငံ, isapowerful manufacturer specialized in manufacturing downjacket, hardshell ဂျာကင်အင်္ကျီ, softshell ဂျာကင်အင်္ကျီ,3 in 1,windbreaker,တေးသံဂျာကင်အင်္ကျီ,ski jacket,ပြင်ပကိုယ်တော်ကိုဟစ်ကြော်,စသည်တို့ကို.
World Down ဂျာကင်အင်္ကျီထုတ်လုပ်သူအခြေစိုက်စခန်း
ဖောက်သည်များကိုအရည်အသွေးမြင့်မားသောကုန်ပစ္စည်းများဖြင့်ထောက်ပံ့ရန်ကြိုးစားသည်. တောင်းဆိုမှုသတင်းအချက်အလက်များ,နမူနာ & ကိုးကား, ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ!
Foshan Ruiniu အဝတ်အစား Co. , Ltd မှ. © 2020 မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး